EReader-ka ugu fiican ee aad iibsan karto, sida loo doorto si fiican? | Dhamaan Akhristayaasha
Villamandos | | Akhristayaasha
Ma rabtaa eReader ugu fiican? Maanta suuqa waxaa ku jira daraasiin buugaag elektiroonig ah oo aan iibsan karno, laakiin nasiib darro iibsashada eBook badanaa ma aha hawl fudud iyo in qof walba uu ku guuleysan karo guul. Sidaa darteed maanta iyada oo loo marayo qodobkan waxaan kugula talineynaa oo ku siin doonaa tilmaamo aad ku iibsato eBook-ka ugu fiican oo aadan u dhiman isku dayga.
Hadaad kafekerayso iibso dhagaystaha ugufiican, qaado qalin iyo warqad ama kaniinigaaga, si aad ugu fiirsato wax kasta oo aan hoos ku tusi doonno oo kaa caawin doona in badan si aad u doorato buuga elektarooniga ah ee ugu fiican ee ku habboon baahiyahaaga. Haddii aad rabto inaad ujeeddada gaadho, eeg miiskan:
Kindle Oasis, oo hadda leh ... Eeg bixinta Wax alaab ah lama helin. Wax alaab ah lama helin. Eeg bixinta
Kobo Aura N236-KU-BK-K-EP ... Eeg bixinta
MUUQAALKA	 Nolosha batteriga oo aad ufiican oo leh kiis gaar ah oo loogu talagalay Amazon. Nooca ugu casrisan ee shidan.	 Kani waa shidan ee maya. 1 iibka xiriirkiisa tayada iyo qiimaha la aqbali karo oo la hagaajiyay.	 Waxay ku taageertaa ePub asal ahaan, arrin aad loo jecel yahay oo loogu talagalay akhristayaasha buugaagta internetka oo bilaash ah. Waxayna u adkeysaneysaa biyaha.
WANAGSAN	 Qalab aad u fudud oo leh badhanno si aad u rogtid bogagga, shaashadda taabashada, nolosha batroolka cajiibka ah. Waxay ku timaaddaa ikhtiyaar WIFI ah, ama WIFI + 3G oo leh iftiin isku dhafan.	 Waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u noqoto akhriste ebook wanaagsan maanta suuqa: iftiinka, Wi-Fi, shaashadda taabashada, is-maamul-wanaagga iyo miisaanka fudud.	 Waxay leedahay wax ka badan ama ka yar waxa Kindle-ku yeelan karo. Laakiin waxa si toos ah u taageera ePub waxay muhiim u tahay akhristayaal badan.
XUN	 Wax kasta oo mid leh, waxaa laga dareemi karaa in shaashadiisu aad u yar tahay. Faa’iidada labaadna waa qiimaheeda sare.	 Qaar ka mid ah akhristayaasha dhaqanka wali uma baran waraaqda elektaroonigga ah waxayna ka cawdaan inaysan warqad ahayn. Waa sax	 Bateriga ma sii soconayo illaa inta aad sharraxayso. Qiimuhuna xoogaa waa qaali marka la barbar dhigo Kindle Paperwhite.
GUDDOOMIYAHA	 Haddii aad rabto inaad haysato akhriste ebook lagu kalsoonaan karo adiga oo aan aad uga fikirin qiimaha, markaa Kindle Oasis ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican.	 6.300+ qiimeynta macaamiisha, waxay leedahay celcelis ahaan dhibcaha 4,5 / 5, marka tani waxay dhaheysaa dhamaanteed inay tahay terminal wanaagsan.	 Akhristaha ebook wanaagsan inuu noqdo bedelka Kindle maxaa yeelay dhammaanteen ma wada jecla sida oo kale.
1 Akhristayaasha ugu fiican
1.1 Paperle Kindle
1.2 Shidin aasaasi ah
1.3 Nooca Cagaarka
1.5 Tamarta eReader Pro
2 Sidee loo doortaa eReader ugu fiican?
2.1 Bandhigga EReader
2.3 Isku xirnaanta WiFi ama 3G
2.4 Naqshadeynta iyo ergonomiska
2.5 Qaamuus isku dhafan
Markii aan ogaanno qaar ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee ay tahay inaan tixgelinno marka aan iibsaneyno eBook, waxaan ka jawaabi doonnaa su'aasha ugu horreysa ee ah kan ugu fiican eReader. Si tan loo sameeyo, waxaan dib u eegeynaa qaar ka mid ah Akhriseyaasha ugu fiican in aan ka heli karno suuqa;
Qaar badan oo ka mid ah Wax alaab ah lama helin. Waa buug elektaroonig ah oo hagaagsan tan iyo markii uu ku dhex jiro hal qalab wax kasta oo loo baahan yahay si loogu raaxeysto akhriska waxaana sidoo kale lagu iibsan karaa qiimo ka jaban ama ka jaban ee isticmaale kasta.
Fikradeena hoose waxaan wajaheynaa qalab ku dhow dhow, Maaddaama sida aan wada ognahay, Amazon eReaders ay adeegsadaan qaabkooda eBook-ka, kaas oo waxyaabo badan xaddidaya xulashooyinkayaga kuwa kalena ay sii adkaynayso joogitaankeenna adduunka akhriska dhijitaalka ah.
Marka xigta waxaan qaban doonaa dib-u-eegis yar oo ku saabsan astaamaha iyo tilmaamaha muhiimka ah ee Kindle Paperwhite;
6-inji oo lagu soo bandhigayo tikniyoolajiyada waraaqda elektaroonigga ah iyo nalka wax lagu akhriyayo ee isku dhafan, 300 dpi, tiknoolajiyadda qoraalka oo la hagaajiyay, iyo 16 miisaan oo cawlan
Cabirka: 16,9 cm x 11,7 cm x 0,91 cm
Miisaan: 206 garaam
Xusuusta gudaha: 4GB
Isku xirnaanta: WiFi iyo 3G isku xirka ama kaliya WiFi
Qoraalka Bookerly, oo u gaar ah Amazon oo loogu talagalay inuu noqdo mid sahlan oo raaxo leh in la akhriyo
Ka mid noqoshada Kindle Page Flip function reading oo u oggolaan doonta dadka isticmaala inay ku dhex wareegaan buugaag bog, uga boodaan cutubka illaa cutubka ama xitaa u boodaan dhamaadka buugga iyadoon lumin barta akhriska
Shaki la'aan, Kindle Paperwhite waxaa loogu talagalay dad badan eReader ugu fiican suuqa.
Shidin aasaasi ah
Ugu dambayntiina waan iloobi kari waynay Shidin, hadda iftiin leh ..., taas oo na siineysa waxa kaliya oo lagama maarmaanka u ah in aan awood u leenahay in aan aqrino buugaagta dhijitaalka ah qiimo aad u hooseeya iyo in isticmaale kasta uu qiyaasi karo dadaal la'aan. Wax badan kama filan karno eReader-kan, laakiin haddii aan raadineyno wax aasaasi ah oo noo oggolaanaya inaan wax aqrinno, Kindle-kan ayaa noqon kara xalka ugu habboon.
Kuwani waa astaamaha iyo tilmaamaha ugu muhiimsan ee Kindle aasaasiga ah;
Cabirka: 169 x 119 x 10,2 mm
Miisaan: 191 garaam
Keydinta Gudaha: 4 GB
Kaydinta daruuraha: waa bilaash oo aan xadidnayn waxyaabaha ku jira Amazon
Isku xirnaanta: WiFi
Qaabab ay taageerayaan: Qaabka 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI aan la ilaalin, PRC wadaniyad ahaan; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP badal ahaan
Iibso eBookga ugu fiican Ma aha hawl fudud, laakiin waxaan rajaynaynaa in talooyinka aan ku siinay inta maqaalkan ku jiro iyo moodooyinka aan ku tusnayba ay xoogaa kuu fududaan doonaan. Waa maxay e-buugga kuugu fiican? Haddii aad rabto wax ka jaban, waxaan sidoo kale haysannaa xulasho kuwa ugu fiican e-buugaagta raqiiska ah.
El Kindle Oasis, oo hadda leh ... Waxaa suurtagal ah inuu yahay eReader leh naqshad wanaagsan oo aan ka heli karno suuqa iyo sidoo kale astaamo iyo qeexitaanno aad uga sarreeya kuwa qalab kale. Waxaa sameeyay Amazon, laga yaabee dhibicdeeda kaliya ee diidmada ah inay tahay qiimaheeda, taas oo ah inay aad ugu sarreyso miisaaniyad ka badan ama ka yar.
Marka xigta waxaan dib u eegeynaa qeexitaannada ugu muhiimsan ee Oasis-kan shidan;
Shaashad: waxay ku jirtaa shaashad 7-inji ah oo leh teknolojiyad e-papper teknoloji ah, taabasho, oo leh xaddiga 1440 x 1080 iyo 300 pixels halkii inji
Cabirka: 16,2 cm x 11,5 cm x 0,76 cm
Miisaanka: nooca WiFi 180 garaam iyo 188 garaam nooca loo yaqaan 'WiFi + 3G'
Xusuusta gudaha: 4 GB oo kuu oggolaaneysa inaad keydiso wax ka badan 2.000 eBooks, in kasta oo ay ku xirnaan doonto cabbirka mid kasta oo ka mid ah buugaagta.
Iftiin isku dhafan
Farqiga sare ee shaashadda ayaa noo oggolaan doona inaan u aqrinno si ka raaxo iyo raaxo badan
Kindle Oasis, oo hadda leh ...
Mid kale oo ka mid ah tixraacyada waawayn ee suuqyada ayaa ah qalabka Kobo, kuwaas oo soo fiicnaaday sannadihii la soo dhaafay isla markaana la heer ah Amazon, in kasta oo xilligan aanu lahayn sumcad iyo caannimo Amazon. Ku Kobo Aura H2O madow Waa mid ka mid ah calaamadaha in Kobo uu si fiican wax u wado.
Waana in buugan elektiroonigga ahi ku faano astaamo qaarkood, oo aan hoos ku eegi doonno, taas oo noo oggolaan doonta inaan ku raaxeysanno akhriska dhijitaalka ah qaab ka xiiso badan.
Cabirka: 179 x 129 x 9,7 mm
Miisaan: 233 garaam
6,8-inji shaashad leh xallinta 1430 x 1080 pixels, tikniyoolajiyadda Waraaqda iyo 265 ppi
1.700 mAh Li-On baytariga
U adkaysta biyaha iyo boodhka iyada oo ay ugu wacan tahay shahaadadeeda IP-67
Kobo Aura H2O madow
Tamarta eReader Pro
Haddii aan raadineyno eReader oo na siineysa qeexitaanno xiiso leh oo aan sidoo kale ku heli karno qiimo ka yar ama ka yar, ikhtiyaar weyn ayaa noqon kara Tamarta Sistem eReader ..., oo ay soo saartay shirkadda Isbaanishka ee Energy Sistem.
Iyadoo a naqshad taxaddar leh, iftiin isku dhafan iyo waxyaabo gaar ah oo ay leedahay nooca 4.2.2 ee Android Maaddaama uu yahay nidaam hawlgal ah, qalabkani wuxuu ku habboon yahay adiga hadda ku soo galay adduunka akhriska dhijitaalka ah.
Hoos waxaan ku tusi doonaa astaamaha iyo tilmaamaha muhiimka ah ee Tamarta tamarta eReader Pro;
Cabirka 160 x 122 x 10 mm
Miisaanka 220 garaam
6-inji shaashad taabasho khad elektiroonig ah oo leh xaddiga 758 x 1024 pixels oo bixiya 212 dpi iyo 16 heerar cawl. Waxay leedahay iftiin isku dhafan oo la isku hagaajin karo
ARM Cortex A9 1.0Ghz processor-laba-geesood ah
8 GB keydinta gudaha ah ee lagu ballaarin karo kaarka microSD illaa 64 GB
2.800 mAh baytariyada lithium
Nidaamka hawlgalka ee Android 4.2.2 Jelly Bean
Tamarta Sistem eReader ...
Haddii aad weli shaki ka qabtid, waxaan ku tusi doonnaa sifooyin taxane ah oo ay tahay inaad tixgeliso markii aad iibsaneysid eBook si aad ugu bilowdo inaad ku raaxeysato akhriska dhijitaalka ah.
Sidee loo doortaa eReader ugu fiican?
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, shaashaddu waa mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee buug kasta oo elektaroonig ah, waana akhrinteeda waxaan maalin walba ku qaadan doonnaa waqtiyo waaweyn. Tan awgeed, waa lagama maarmaan inaad leedahay a shaashadda cabbir ku habboon, oo leh xallinta ugu fiican iyo in illaa iyo inta suurtagal ah uu leeyahay iftiin gudaha aha maxaa yeelay waxay noo oggolaan doontaa inaan wax u aqrinno hab raaxo leh oo aan daalin ama indhaheenna ku cidhiidhin meel kasta.
Sidoo kale waa muhiim inaan eegno waqtiga aan iibsanayno mid ama buug kale oo elektaroonig ah nooca khariidadda elektarooniga ah ee ay isticmaasho. Tikniyoolajiyadda E-ink Pearl waa tan ugu horumarsan suuqa waxayna ku dhex jirtaa inta badan aaladaha ugu caansan suuqa, laakiin marna lagama maarmaan ma aha in la hubiyo dhinacan maadaama ay noo oggolaaneyso inaan si raaxo leh u aqrinno sidoo kalena aan batteri u leenahay nolosha aad uga dheer noocyada kale ee tikniyoolajiyadda.
Dib u eegista Kobo Forma
Shaashadu waa wadnaha buugga elektiroonigga ah, sidaas darteed shaki la'aan, waa mid ka mid ah astaamaha ay tahay inaad tixgeliso inta ugu badan markaad dooranayso eReader ugu fiican.
Bateriga badanaa waa wax labaad oo buugaagta elektarooniga ah, maadaama mahadhada khad elektarooniga ah muddadeeda lagu qiyaaso toddobaadyo, laakiin waa inaanan ilaawin sidoo kale. Adiga oo aan aad ugu tiirsaneyn xayeysiinta ay soo saarayaasha oo dhami ka dhigayaan in batteriga qalabkaagu ugu yaraan soconayo 8 toddobaad, Waa inaan si dhow ula soconaa mAh batariga oo aan hubinno fikradaha isticmaaleyaasha kale internetka
Waxa kale oo xiiso leh in la hubiyo nooca lacag ee eReader uu haysto tan iyo haddii ay leedahay lacag degdeg ah waxay noo oggolaan doontaa inaan ku soo dallacno aaladda muddo gaaban. Tani runti faa'iido ayey yeelan kartaa haddii aan wax badan ku safrayno buugga elektaroonigga ah.
Shaashadda oo ay weheliso shaashadda, baytarigu waa weji kale oo aasaasi ah oo wejiga laga qabo dooro eReader ugu fiican.
Isku xirnaanta WiFi ama 3G
Isticmaalayaasha badankood tani ma noqon doonto ikhtiyaar aad u xiiso badan, laakiin in yar ayaa lagama maarmaan noqon doonta. Waana taas Haddii eReader uu leeyahay isku xirnaanta WiFi ama 3G, waxaan si fudud u heli karnaa maktabadaha dijital ah ama xitaa maktabaddeenna oo aan daruuraha ku leenahay.
Haddii, dhinaca kale, eReader-keena cusubi uusan lahayn nooc isku xirnaan ah, fursadahayaga markay tahay helitaanka ama helitaanka buugaagta dhijitaalka ah si weyn ayaa loo dhimi doonaa. Way cadahay hadaan raadino eBook ugu fiican, isku xirnaanta waa inay ahaato mid dhameystiran.
Naqshadeynta iyo ergonomiska
Waxaan dhihi karnaa asalka waa inaan tixgelino dhinacyada sida naqshadeynta ama ergonomics. Ku saabsan naqshadeynta waxaan xisaabta ku darsan karnaa inaysan laheyn geesoolo aad loogu dhawaaqo ama taasi nooma oggolaanayso inaan si raaxo leh u aqrinno.
Waxa kale oo lagugula talin lahaa inaad tijaabiso aaladda ka hor intaadan iibsan, tusaale ahaan dusha sare, si loo hubiyo inay ku raaxeysaneyso gacanta oo aysan noqon doonin mid aad u dhib badan oo aan noo oggolaan doonin inaan wax aqrinno, ku raaxeysanayno bog kasta.
Qaamuus isku dhafan
Waxay kuxirantahay waxa aan aqrino, waa in kabadan suurto gal in aan ubaahanahay inaan helno qaamuus udhaw si aan kor uqaadano oo aan ufahano ereyada qaar. Buugaagta elektaroonigga ah qaarkood waxay horey u leeyihiin qaamuus la dhisay, marka haddii aad saaxiibbo ku tahay qaamuusyada oo aad u isticmaashid mar kasta oo aad aqriso, il gaar ah ku hay in buugga elektarooniga ah ee aad iibsaneyso uu leeyahay shaqadan.
Haddii aad halkaan ka timid oo aad weli shaki ka qabtid, link this Waxaad haysataa xulashada eReaders oo la soo bandhigo si aad u doorato midka ugu habboon baahidaada.
Akhriska 'Prime Prime' ', waa sicir guri oo cusub oo loogu talagalay ebook-yada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhammaan akhristayaasha » hardware » Akhristayaasha » Akhrise wanaagsan
Dudduud 58 dijo
Tixgelin kuma aadan siinin qaababka buugaagta ay akhrin karaan, marka laga hadlayo xaggeeda dabka aad ayuu u liitaa.
Waxaa jira noocyo kale oo xiiso leh, sida PocketBook-ka, oo aad si naxariis darro ah u ilowday.
Ugu dambeyntiina, faallo shakhsi ah: Akhristayaasha Android way ka dabacsan yihiin, laakiin, ugu yaraan celcelis ahaan adeegsade, ka dhib badan adeegsiga (oo kaamil yar) aaladda loogu talagalay keliya akhriska.
Ku jawaab Patroclo 58
Aynu nidhaahno waa run runtu ma wada maamusho dhammaan qaababku, sidoo kale waa run in u beddelashada buug sida dagaalkii Tolstoy iyo nabaddii laga soo qaaday epub ilaa Azw ama mobi ay qaadanayso ilaa 23 ilbidhiqsi oo leh kalabaydh iyo kombuyuutarkayga in aan haysto amd duug ah xudunta
Waa inaad ka taxaddartaa Kindle maxaa yeelay waxay umuuqataa inay barnaamijyo duugow ah oo ay ku adag tahay inay gaaraan laba sano oo nolosha ah. Hal sano ka dib (marka dammaanadda ay siinayaan dhammaato), waxay u muuqdaan inay bixiyaan dhibaatooyin badan oo hawlgal ah, illaa inta si joogto ah looga xirayo oo loo tuurayo. Ka raadi internetka "qufulka xarkaha" oo waad arki doontaa.
WADAJIRKA MA LAGU QAADAN KARAA GADAAL? Taasi waxay ka timid AZW ilaa EPUB? MAHADSANID.
Sawirka meeleynta Alberto Lozano dijo
Guriga wali waxaan haysannaa jiilkii koowaad ee Kindle, oo laga iibsaday Kirismaska ​​2007, oo socda.
Sidoo kale Kindle 4 oo aan iibsanay Kirismaskii 2011 iyo, ugu dambeyntiina, labo warqad oo shidan ah ayaa iibsaday 2012 iyo 2013 siday u kala horreeyaan.
Adeegsiga ay qoyska oo dhami siinayaan waa mid xoog badan oo kaliya mid ka mid ah waraaqaha waraaqaha ayaa burburay dhowr jeer oo lagu xalliyay iyadoo la raacayo tilmaamaha taleefanka ee ka soo baxa Amazon (adeeg aan caadi ahayn oo aad u dhakhso badan) Muddo yar ka dib waxaa jiray cusbooneysiin nidaam ah mana jiraan wax dhibaato ah mar kale.
Dhinaca kale, buugaagta elektarooniga ah (Papyre iyo kuwa kale ee jiilkeeda ah) ee aan iibsanaynay waxay aakhirkii u gudbeen barta cagaaran iyagoo joojiyay shaqadii laguna beddelay Kindle.
Fikradda ah "gabow gabal qorshaysan" yaan lagu xadgudbin. Waxaa jira halyeeyo badan oo reer magaal ah oo ka dambeeya hadalkaas.
Waxaa jira xaalado aad u yar oo shilku si joogto ah u burburo, dhibaatada badanaa si dhakhso leh ayaa loo xaliyaa. Xaqiiqdii marka la eego kakanaanta, qalabka elektiroonigga badankood maanta waxay lahaan karaan dhibaato xannibaadda oo lagu xallin karo dib-u-soo-kabasho fudud.
Ku jawaab Alberto Lozano
Kee baa ugu fiican akhriska pdf? Waxaan lahaa inta udhaxeysa sunnaheyga midka cusub ee Kobo Aura laakiin waxaan ku arkay tijaabooyin YouTube-ka waana niyad jab ...
Iyagu ma tiro aad u tiro yar. Waxaan sidoo kale ku farxay Kindle 3 oo waxaan la mid ahaa fekerkaaga, illaa toddobaadkan si lama filaan ah ayey igu dhimatay, anigoo si fiican u daryeelay isla markaana aan isticmaalin deg deg, malaha waxaan aqriyay buug bil ah waana taas isticmaal xoog hooseeya. Ka raadinta dhibaatadayda internetka, waxaan helay boqollaal kun oo kiisas la mid ah, oo ay ku jiraan shirkado aad u tiro yar oo ku takhasusay hagaajinta. Igama muuqdaan kiisas "dhif ah" ama "qaas ah". Waxaad kahelaysaa shilal ka yar ama arrimo lama filaan ah oo ku saabsan shey kasta oo elektaroonig ah oo caan ah marka loo eego Kindles Marka la eego tirada kiisaska la midka ah tayda ee aan la kulmay, waxaan shaki iiga jiraa tayada Amazon's Kindle. Xilligan la joogo waxba ma xallin dhibaatadeyda, sidaa darteed waxaan doortay inaan iibsado batteri cusub oo aan ku duceysto in taasi ay tahay dhibaatada. Haddii ay dhacdo in laygu qasbo inaan iibsado mid cusub, ma noqon doonto wax soo saar Kindle ah, waxaa la i tusay in tayadiisa shaki ku jiro.
Ku jawaab pacogogo
Waxaan u maleynayaa in hadda ay adag tahay in laga adkaado saamiga qiimaha / tayada ee ay bixiso nooca loo yaqaan 'Paperwhite'. Waa run in bilowgiiba uusan akhrin karin dhammaan qaababka formats laakiin isticmaalka Calibri waxaa si fudud loogu rogi karaa qaab u dhigma Kindle.
Maalin wanaagsan. Dhibaatadaada ma lagu xaliyay iibsashada batari cusub?
Ma ilaawin kaliya qaababka, sidoo kale codka. Midna looma isticmaalo in lagu dhagaysto buug maqal ah ama muusig inta aan wax akhrinayo iyo, si daacad ah, haddii aan u baahdo inaan qaato mobilo ama kaniini si aan ugu xidho internetka, mp3 player oo muusig ah iyo dhagayste buugaag ah ... akhriya badan waxaanan ku mideynayaa wax walba kiniin
Dhibaatooyin ayaan ku qabaa masruufka batteriga ee ebook papyre 6.1 iyo shaashadda ayaa lagu hubiyay tusmada, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado halka aan ka keeni karo buugga elektarooniga ah si dib loogu eego
Ku soo jawaab Silvia Trachcel
Waad ii sheegi kartaa in buugaagta elektaroonigga ah loo adeegsado inay kugula xiriiraan shabakadda dadweynaha ee maktabadaha qaranka oo si toos ah loogu soo dajiyo.
Ku jawaab si nadiif ah
Waxaan rabaa inaan iibsado akhristaha elektaroonigga ah, sida ugu jaban ee suurtogalka ah, taas oo ii oggolaaneysa inaan akhriyo pdf (ma ahan sawir ahaan laakiin qoraal ahaan) iyo epub iyo, haddii ay suurtagal tahay, waxay leeyihiin ikhtiyaarka buugaagta maqalka.
Anigu waxba ma sameeyo laakiin waxaan akhriyaa falanqaynta laakiin waxba kama cadda faallooyinka dadka. Tusaale ahaan, sida caadiga ah falanqaynta Kindle waxay sheegaysaa inay aad ugu fiican tahay qiimaha ay leedahay oo ay akhriyaan pdf iyo kuwa la mid ah, laakiin markaa dadka isticmaala badankood waxay yiraahdaan waxay bixiyaan dhibaatooyin badan, in pdfs ay u akhriyaan kaliya sawirro sidaas ah ama aad ka tagto U fiirso akhriska wax aad u yar ama waa inaad u socotaa midig iyo bidix si aad ugu habboonaato sawirka bogga.
Waxaan kaloo aqriyay in TAGUS ay fiicanyihiin laakiin waxay umuuqataa inaysan la jaan qaadi karin buugaagta amazon ...
Sikastaba, aad ayaan u lumay waxaanan rabaa akhriste maxaa yeelay markasta waxaa igu raran buugaag badan: ')
Ku jawaab Annabel
Ma jiro dhagayste ku siinaya adiga natiijooyin lagu qanco oo leh PDF. Xulashada ugu fiican marwalba waa in loo badalo PDF-ga ePub kombuyuutarka.
Waxaan raadinayey wax la mid ah aakhirkiina waxaan qabaa inaan doorto buugga Mars de Boyue. Booxes sidoo kale waa weyn yihiin, laakiin qiimaha waa mid aad u sarreeya.
Ka jawaab hoist
Maxay tahay sababta qiimeyn kasta ee akhristayaasha elektaroonigga ah ee la sameeyay, looga dhaafay in la caddeeyo in tirada ugu badan ee shaqooyinka ku jira shabakadda ay ku jiraan qaab elektaroonig ah, oo aan la jaan qaadi karin Kindle?
Waa maxay sababta aysan u istaagin sidaas darteed, iyo isagoo ah qaab shid gaar ah oo kaliya kan uu qirayo, mid ayaa lagu qasbay inuu iibsado oo kaliya shaqooyinka qaabka ololka, ee ay iibiso Amazon, oo taas, dabcan, lama soo dejin karo? internet bilaash ah?
Waan ogahay in dhammaan beddelaadda lagama maarmaanka ah lagu sameyn karo goobta Caliber, laakiin maxaad ugu soo gudbineysaa dhibaatadaas, haddii aad si toos ah ugu akhrisan karto e-pub?
Jawaab Ignacio Nachimowicz
Sababtoo ah asal ahaan waxaad ku beddeli kartaa Caliber ebook-yada qaab epub ah qaab mobi ama azw3, kuwaas oo ah kuwa Kindle aqbalo.
Sababtaas awgeed, dib u eegisyo badan xitaa ma sheegaan, maxaa yeelay Caliber dhibaatada Kindle qaabka qayb ahaan waa "lagu xaliyay".
Buugaagta lagu akhrinayo Ingiriisiga
Buugga Shanaad ee Grey